Thatha i-hemoglobin ye-glycated (HbA1c) > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-Glycated kudlala indima enkulu ekuhlolweni kwesifo sikashukela. Lolu cwaningo lusiza ukukhomba lesi sifo emabangeni okuqala entuthuko, ukuhlola ubungozi obukhona bezinkinga, ukuvimbela ukwanda koshukela ngokuzayo, ukulungisa ukwelashwa, umsebenzi womzimba kanye nokudla okunempilo. Abesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela sohlobo loku-1 kufanele bahlolwe ukuze kulungiswe ukwelashwa kwe-insulin ngesikhathi esifanele.
Yini i-glycated hemoglobin
I-hemoglobin ye-Glycated kwesinye isikhathi itholakala ezincwadini zesayensi nezokwelapha njenge-glycosylated noma njengegama elifushane leHbA1c. Yize kunezinhlobo ezintathu zakhona: HbA1a, HbA1b neHbA1c, ikakhulukazi eyokugcina inesithakazelo, ngoba yakhiwa ngamanani amakhulu kunamanye.
Ngokwami, le nkomba yazisa ukuthi ingakanani i-glucose esegazini isikhathi eside (kufika ezinyangeni ezi-3). Kubonisa ukuthi mangaki amaphesenti hemoglobin aboshelwa ngokungenakuphikiswa ku-glucose.
I-Hb - i-hemoglobin ngqo,
I-A1 ingxenyana yakhe,
c - ukukhipha.
Kungani uthathe i-HbA1c
Abesifazane abakhulelwe ukwembula isifo sikashukela esisebusweni.
Abesifazane abakhulelwe abaphila nesifo sikashukela sohlobo lokuqala ukubona ukwanda kwe-hemoglobin ye-glycated ngesikhathi, okungaqala ukungasebenzi kahle kokubeletha, isisindo somntwana esiphakeme, kanye nokuphuphuma kwezisu nokubeletha ngaphambi kwesikhathi.
Abantu abahlolwa ukubekezelela i-glucose. Lokhu kuyadingeka ukuthola umphumela onembe futhi onemininingwane eminingi.
Labo asebethole isifo sikashukela ukuhlola i-glycemia yabo isikhathi eside.
Futhi, i-hemoglobin ye-glycated ivumela okokuqala ukuthola ushukela noma ihlole isinxephezelo sayo.
Ukonakala kweHbA1c ukuthi awudingi ukuyilungiselela. Indaba yocwaningo yigazi, ingathathwa sobabili kusuka kuthambo nangomunwe - kuya ngohlobo lokuhlaziya. Ukuhlaziywa kungenziwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Uma ushintsho belungekho esiswini esingenalutho, lokhu kufanele kuxwayiswe kusengaphambili.
Izinzuzo nobubi bocwaningo
Indlela ngayinye inezinzuzo nezinzuzo zayo. Inzuzo ebaluleke kakhulu yalokhu kuhlaziywa ukubonwa kwezinga likashukela kweziguli ezingadli noma ezingadli izidakamizwa njalo. Abanye abantu bazama ukukhipha udokotela wabo, baqale ukunciphisa ukusetshenziswa kwamaswidi nje isonto ngaphambi kokunikela ngegazi, kepha iqiniso lisabonakala, ngoba i-hemoglobin ye-glycated ikhombisa inani eliphakeme le-glucose ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.
Isifo sikashukela siyatholakala nasezigabeni zokuqala,
Ungahlola ukunamathela ekwelashweni nasekudleni ezinyangeni ezi-3 ezedlule,
igazi liphuma ngomunwe noma emthanjeni,
Ukuhlaziywa kwenziwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku,
ngokuya ngemiphumela, ubungozi obukhona bezinkinga zikashukela buhlolwa,
izifo ezithathelwanayo azithinti umphumela.
Okubi kubalwa izindleko zokuhlaziywa. Futhi, akuhambi kahle ukwenza ukuhlaziya kuzo zonke izimo, ngoba imiphumela ingahle ihlanekezelwe. Ucwaningo luveza imiphumela eyiphutha kumacala alandelayo:
Ukumpontshelwa igazi. Lokhu kukhwabanisa kungaphazamisa ukukhonjwa kwezinga le-HbA1c yangempela, ngoba izinhlaka zomnikeli ziyehluka kulowo zomuntu ofakwe ngegazi lomunye umuntu.
Izifo zegazi, ezinjenge-iron defence anemia.
Kukhishwe ngaphambili ubanzi.
Izifo zesibindi nezinso.
Kwehliswe amazinga we-thyroid.
I-laboratories ehlukile ingaba namanani ahlukile wereferensi we-glycated hemoglobin; amanani ajwayelekile akhonjiswa kwimiphumela yokuhlaziya.
Inani le-HbA1c,% IGlucose, mmol / L Isiphetho sokuqala
4 3,8 Lokhu kusho ukuthi ingozi yokuba nesifo sikashukela incane, ngoba i-carbohydrate metabolism ijwayelekile
5,7-6,0 6,5-7,0 Kukhona ubungozi besifo sikashukela. Ngemiphumela enjalo, kufanelekile ukunciphisa okumnandi ekudleni futhi ubhalise kwi-endocrinologist
6,1-6,4 7,0-7,8 Ingozi enkulu yokuba nesifo sikashukela
6.5 nangaphezulu 7.9 nangaphezulu Izinkomba ezinjalo, kufanele uthintane nodokotela ngokushesha. Imvamisa, lezi zinombolo zikhombisa ushukela okhona, kepha ukuhlolwa okwengeziwe kuyadingeka ukuqinisekisa ukutholwa.
Izimbangela zeHbA1c eziphakeme zingaba:
Isifo sikashukela mellitus siyatholakala.
Ukwehluleka kwe-carbohydrate metabolism.
I-Iron defence anemia.
Ukususa i-spleen esikhathini esedlule esedlule.
Ukuxilongwa ngemikhiqizo ye-metabolic ehlala emzimbeni isikhathi eside kunesikhathi esifanele ngenxa yezifo zohlelo lokuchama.
Izimbangela ze-hemoglobin encishisiwe
Yehlisa impilo yeseli elibomvu elihambisana nezifo zegazi ezingavamile.
Isimo ngemuva kokuhlupheka ngokweqile kwegazi.
Isimo ngemuva kokumpontshelwa igazi.
Ukuphazamiseka kwengqondo pancreatic.
Uma owesifazane okhulelwe edlula ekuhlolweni, inkomba ingashintshwa kuyo yonke inkathi yokuzala ingane. Izizathu ze-gxuma kungenzeka ukuthi zibange:
i-anemia yokuntuleka kwe-iron kumama okhulelwe,
izithelo ezinkulu kakhulu
umsebenzi wezinso ongonakalisiwe.
Ukuncika kwe-HbA1c kuzinga le-glucose egazini
Izinga eliphakathi le-glucose egazini izinyanga ezintathu, mmol / l Inani le-hemoglobin ye-glycated,%
Amazinga Target (evamile) sikashukela
“Izinga lethagethi” lisho izinamba okudingeka uzabalwele ukuze ungazithobi izinkinga ngokuzayo. Uma umuntu onesifo sikashukela enenani le-glycated hemoglobin elingaphansi kwama-7%, lokhu kuyinto evamile. Kepha kungaba ngcono uma lesi sibalo sithambekele ku-6%, into esemqoka ukuthi imizamo yokunciphisa ingalimazi impilo. Ngokulawulwa kwesifo sikashukela esihle, inani le-HbA1c Lingancishiswa kanjani i-hemoglobin?
Ukuze ungavumeli impilo nempilo ihambe, kubalulekile ukuthatha izinyathelo ezanele zokunciphisa i-HbA1c. Ngemuva kwakho konke, uma lokhu kungenziwa, ingozi yezinkinga zesifo sikashukela iyanda.
Izindlela ezi-5 ezisebenzayo zokunciphisa i-HbA1c ngaphandle kokulimala:
Ungawunaki umuthi. Odokotela abagcini nje ngokubayala, kufanele bathembeke. Ukwelashwa okwanele kwezidakamizwa kuyisihluthulelo sezinkomba ezinhle. Akunconywa ukubuyisela izidakamizwa ngokwazo ngama-analogues ashibhile, noma ngabe kukhona into efanayo esebenzayo.
Ukudla okufanele. Kuyadingeka ukunciphisa kancane inani lama-carbohydrate asetshenzisiwe futhi wenze izingxenye ezincane, kepha wandise inani lokudla. Umzimba kufanele ungabi nayo indlala futhi ube ekucindezelekeni okungapheli. Ngokubulawa yindlala isikhathi eside, ukudla ngokweqile okuvame ukwenzeka, okuyisikhathi sokugxuma okubukhali ushukela.
Umsebenzi womzimba. Ukuqeqeshwa kweCardio kusebenza kakhulu, lapho uhlelo lwezinhliziyo luqiniswa khona, inhlala-kahle iyathuthuka futhi namazinga kashukela ancishisiwe. Akufanele ulindele imiphumela esheshayo, ngakho-ke ezemidlalo kufanele zihlanganiswe ngokuvumelanayo kusijwayezi esivamile sempilo. Uma kuvinjelwe, ukuhamba amabanga emoyeni omusha nakho kuzosizakala.
Ukugcina idayari. Kufanele kubhalwe phansi ukusebenza ngokomzimba, ukudla, izinkomba ze-glycemia (ukukalwa nge-glucometer), imithamo yezidakamizwa kanye namagama abo. Ngakho-ke kulula ukubona amaphethini okukhuphuka noma ukuncipha kweglucose yegazi.
Ukulawulwa njalo koshukela. Abanye abantu, ukuze bonge imali, basebenzise imitha kaningana kunesidingo. Lokhu akufanele. Ukulinganisa njalo kusiza ukulungisa ukondleka noma umthamo wezidakamizwa ngesikhathi.
Lapho umuntu enikezwa okokuqala inkomba yokuthi enze lokhu kuhlaziywa, unemibuzo, izimpendulo ezifundwa kangcono kudokotela. Kepha zingatholakala futhi ku-inthanethi. Nazi ezivame kakhulu:
Kungenzeka yini ukuthi imiphumela ibe yiphutha futhi kungani?
Isici somuntu kumele sibhekwe ngaso sonke isikhathi: amashubhu angahlanganiswa, alahlekile, athunyelwe ekuhlaziyeni okungalungile, njll. Futhi, imiphumela ingahlanekelwa ngenxa yezizathu ezilandelayo:
ukuqoqwa okungafanele kwezinto
kutholakala ngesikhathi sokulethwa kwegazi (ungawukhathaleli umphumela),
ukuba khona kwe-carbamylated hemoglobin kubantu abanezinkinga zezinso. Le nhlobo ifana ne-HbA1c, ngoba inecala elifanayo, kwesinye isikhathi lithathwa njenge-glycated, ngenxa yalokho umphumela walokho ku-overestimated.
Ngabe kuphoqelekile ukusebenzisa i-glucometer uma ukuhlaziywa kwe-HbA1c kunikezwa njalo?
Ukuba khona kwe-glucometer yomuntu siqu kuyimpoqo, kufanele kusetshenziswe kaningi njengoba kuchazwe yi-endocrinologist. Ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycated kukhombisa umphumela ophakathi kwezinyanga ezi-3. Kepha angakanani amazinga kashukela ashintshashintshayo usuku lonke - cha.
Ukuhlaziywa kwezindleko ku-HbA1c?
Isifunda ngasinye sinamanani aso. Intengo elinganiselwayo yayo ingama-ruble angama-800-900.
Ngabe imiphumela etholakala emalabhoratri ehlukene izofundiswa okuthile?
Ukuhlaziywa akunayo indlela ethile yokuxilonga esetshenziswa yiwo wonke ama-laboratories, ngakho-ke imiphumela ingahluka kancane. Ngaphezu kwalokho, ezindaweni ezihlukile kungavela amanani ahlukile wesethenjwa. Kungcono ukukhetha ilabhorethri yesimanje futhi efakazelwe bese uhlaziya lapho njalo.
Ukuthatha kangaki i-hemoglobin ye-glycated
Ochwepheshe besifo sikashukela bayelulekwa ukuba bahlaziye njalo ezinyangeni ezi-3, okungukuthi, izikhathi ezi-4 ngonyaka ukubheka ukusebenza kahle kwezidakamizwa, isilinganiso sesinxephezelo se-carbohydrate metabolism futhi baqiniseke ukuthi inkomba isenanini elitshengisiwe.
Kungani le nkathi yesikhathi ikhethiwe? I-hemoglobin ye-Glycated ihlotshaniswa ngqo namaseli abomvu egazi, okuphila kwawo kungathi izinsuku ezingama-120, kepha ngezifo ezithile zegazi kungancishiswa.
Uma izinga likashukela selizinzile, ukwelashwa ngezidakamizwa kukhethwe kahle futhi umuntu elandela ukudla, ungathatha isivivinyo kancane - amahlandla ama-2 ngonyaka. Abantu abaphilile bahlolwa njalo ngeminyaka engu-1-3.
Ngabe i-HbA1C yehlukile emadodeni nakwabesifazane
Umehluko phakathi kwemiphumela yabesifazane nabesilisa incane. Ihluka ngokoqobo nge-0.5%, ehambisana nenani le-hemoglobin ephelele.
Amanani amaphakathi we-HbA1C kubantu bobulili obuhlukile ngokuya ngeminyaka:
Ngaphansi kweminyaka engama-29 4,6 4,6
30 kuye ku-50 5,5 - 7 5,5 – 6,4
Bangaphezu kuka-50 Ngaphansi kuka-7.5 Ngaphansi kuka-7
Ukuphela kwendlela eyiqiniso esetshenziswa yiwo wonke umuntu ayiyona. Ukunqunywa kwe-hemoglobin ye-glycated kungenziwa kusetshenziswa:
I-ion exchange chromatography,
Ekuphetheni, singasho ukuthi ukuhlaziya kuyisifundo esidingekayo empilweni yesifo sikashukela, ngakho ungabona ukuthi isifo sikashukela sinxephezelwa kahle kanjani nokuthi kukhethwe kanjani ngokwanele izidakamizwa.
Yini i-glycated hemoglobin ekhombisa? Kungani umuntu onesifo sikashukela enza lolu vivinyo?
I-Glycohemoglobin ikhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi i-neuropathy, isifo se-coronary, unyawo lwesifo sikashukela, futhi ibuye ikhombise ukuthi ngabe umthamo we-insulin wohlobo 1 sikashukela ubalwa kahle yini. Ake siqonde ukuthi luyini lolu hlaziyo. Unganikela kanjani ngegazi nge-glycogemoglobin nokuthi uyiqonda kanjani imiphumela?
IGlycohemoglobin Assay: Izici nezinzuzo
Kulokhu, isiguli esinohlobo lwesifo sikashukela sokuqala singaba noshukela omningi ngemuva kokudla (uma isilinganiso se-insulin singabalwa kahle).
Ngohlobo 2 sikashukela, ushukela ophezulu kungenzeka ngezikhathi ezithile uma ukudla kungalandelwa.
Mhlawumbe ukukhuphuka kweushukela ngokweqile. Kulesi simo, ukuxilongwa kwegazi lasekuseni esiswini esingenalutho kuzokhombisa imiphumela ecishe ifane, ukukhuphula kancane ushukela wegazi ekuseni. Futhi izinkinga zizokhula ngokushintshana okugcwele.
Ngasikhathi sinye, konke ukweqa kweglucose phakathi nezinyanga ezintathu kuzobonakala kwisilinganiso esandisiwe se-glycohemoglobin. Isilinganiso esiphakeme salokhu kukhombisa, inani leshukela likhuphuka kakhulu emikhunjini. Lokhu kusho ukuthi izinkinga eziningi zesifo sikashukela zakha ezinye.
Ezigulini ezinesifo sikashukela, kunconywa ukuyisebenzisa kanye ngesonto. Kulolu vivinyo, iziguli ezinesifo sikashukela zilawula ushukela wegazi kaningana ngosuku:
ngaphambi kokudla konke
2 amahora emva kokudla ngakunye,
nasebusuku, ngehora lesithathu.
Lesi silinganiso sibizwa ngephrofayili ye-glycometric, yakha isithombe esiphelele kakhulu kunokuhlaziya okujwayelekile ushukela, kepha akwanele ukuthola izinkinga nokulawula umthamo we-insulin.
Ungayiqonda kanjani imiphumela yokuhlaziywa?
Ngasikhathi sinye, ngaphezu kwengxenye yemizimba etholwe glycated ingeyanyanga edlule (ngaphambi kokuhlolwa). Lokho wukuthi, ukuhlaziya kukhombisa inani eliphelele likashukela wegazi ikakhulukazi esikhathini esiyinyanga eyodwa nesigamu kuya kwezimbili.
Ezigulini ezinesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo, okuqukethwe yi-glycohemoglobin (HbAIc) kuze kube ngu-6.5% kubhekwa njengesibonakaliso esihle, esibonisa ukuhambisana nokudla (okunesifo sikashukela sohlobo 2) nokubalwa okuyikho komthamo we-insulin (uhlobo 1 sikashukela).
Ukunyuka okwengeziwe kwesikhombi kukhombisa ukwakheka kwezinkinga zesifo sikashukela nesidingo sezinguquko.
Isiguli sohlobo 2 sikashukela sidinga ukulawula imenyu futhi sinikeze izinga lomsebenzi we-motor.
Isiguli esitholakala sinesifo sikashukela sohlobo 1 sidinga ukulungiswa komthamo womjovo we-insulin.
Ukuhlolwa kweglucose kwegazi
Kuyaqhutshwa Iglucose ijwayelekile Isimo somngcele Isimo sikashukela
Iminyaka engu-5 nangaphezulu 3,3-5,5 5,6-6 6.1 nokuningi
Izingane ezineminyaka engu-1-5 ubudala 3,3-5 5,1-5,4 5.5 nokuningi
Kuze kube unyaka ongu-1 2,8-4,4 4,5-4,9 5 nokuningi
Umphumela% Kusho ukuthini inkomba?
Ngaphansi kuka-5.7 Ithuba lesifo sikashukela lincane, i-carbohydrate metabolism ijwayelekile
5,7-6,0 Ingozi yesifo sikashukela iphansi, kepha ikhona. Ukuvimbela, kungcono ukushintshela ekudleni okuphansi kwe-carb.
6,1-6,4 Ubungozi besifo bukhulu. Indlela yokuphila enempilo nokudla yizimo ezibalulekile zokuqhubeka ukhona.
Ngaphezu kuka-6.5 Ukuxilongwa kusengcupheni. Kudingeka ucwaningo olwengeziwe ukucacisa lesi simo.
Ukuhlolwa kwe-hemoglobin ye-glycated: okujwayelekile emadodeni nakwabesifazane abanesifo sikashukela
Iphephabhuku lezokwelapha laseBrithani lishicilele imiphumela yokuhlolwa okwakufanele kutholakale ukuxhomekeka kwe-glycosylated hemoglobin kanye nengozi yokufa kwengxenye yesilisa yesilisa. I-HbA1C yayilawulwa kumavolontiya aneminyaka ehlukene: ukusuka eminyakeni engama-45 kuye kwengama-79. Ngokuyisisekelo, babengabantu abanempilo (ngaphandle kwesifo sikashukela).
Kwabesilisa abane-glucose efundwa kuze kufike ku-5% (ngokoqobo), ukufa kwaba kuncane (ikakhulukazi kusuka ekuhlaselweni yinhliziyo nemivimbo). Ukungezelela le nkomba nge-1% kuphela ekhuphule amathuba wokufa ngama-28%! Ngokwemiphumela yombiko, inani le-HbA1C elingu-7% lenyusa ubungozi bokufa ngama-63% (uma liqhathaniswa nokujwayelekile), kanti u-7% wesifo sikashukela bekulokhu kubhekwa njengomphumela omuhle!
Ukuhlolela i-glycated hemoglobin kuyisifundo esibalulekile, uhlobo lomaka we-biochemical ekuvumela ukuthi uthole isifo sikashukela ngokunembile. Kuyasiza ukuqapha ukusebenza kwelashwa kwakhe.
Umsebenzi oyinhloko we-hemoglobin ukulethwa kwe-oksijini emangqamuzaneni. Le proteni ihlangana kancane nama-molecule eglucose. Yile nto ebizwa ngokuthi i-glycosylated hemoglobin. Ushukela omningi osegazini, kwakheka i-hemoglobin ethe xaxa, ebonisa izinga lobungozi besifo sikashukela nemiphumela yako.
Njengamanje, lokhu kuhlolwa kuyimpoqo ye-hyperglycemia, kukuvumela ukuthi uthole isifo sikashukela lapho ezinye izinhlobo zokuhlolwa zingasilungisi. Ukuhlaziywa kusiza ukukhomba ngokunembile ushukela ezigabeni zokuqala. Ukuhlolwa okunjalo kuzosiza abanesifo sikashukela baqonde ukuthi wayelawula kahle kangakanani i-glycemia yezinsuku ezingama-90-100, ukuthi ushukela uthuthuka ngokushesha kangakanani, nokuthi ngabe imishanguzo ekhethiwe yokunciphisa ushukela iyasebenza.
Izinzuzo kanye nokulimana kwendlela
Ama-molecule we-glucose asemgodini wegazi asabela ngamangqamuzana abomvu egazi. Umphumela uba yinhlanganisela ezinzile engaphuli ngisho noma la maprotheni efa esibondeni. Le mpahla yabo yenza ukuthi sikwazi ukubona inkinga kusenesikhathi, lapho ukuhlolwa okujwayelekile kungazizwa kushintsha egazini.
Ukuhlaziywa ngaphambi kokudla kukuvumela ukuthi unqume ushukela olambile, ngemuva kokudla - kunikeza ukuhlolwa kwesimo sayo ngaphansi komthwalo. I-Glycated hemoglobin ku-mellitus yesifo sikashukela ilinganisela i-glycemia ezinyangeni ezintathu ezedlule. Yini inzuzo yale ndlela yokuhlola?
Ukuhlolwa kungenziwa hhayi ekuseni kuphela, emaphethelweni ophelelwe amandla olambile, ukuhlolwa kukhombisa isithombe esinembe kunazo zonke, kwembula isifo sikashukela esigabeni se-prediabetes.
Ukuqina kwe-preanalytical - igazi elathathwa ngaphandle kwelabhorethri lingagcinwa kuze kuhlolwe i-vitro.
I-HbA1C isiza ukuhlola isilinganiso sesinxephezelo sikashukela kushukela, ukuze ukhethe isilinganiso esifanele semithi ye-hypoglycemic.
Isikhombisi asincike ekucindezelekeni, ezifweni, emaphutheni ekudleni, ukuthatha noma imuphi umuthi.
Ukuhlolwa kushesha, kulula kakhulu futhi kushibhile kunokuhlolwa kwendabuko kokukhuthazelela ushukela, okuthatha amahora amabili.
Nge-anemia, hemoglobinopathy noma izinkinga nge-yegilo yegilo, kanye nokuningi ekudleni kokudla okugcwele amavithamini E no-C, imiphumela ayilungile. Le ndlela ayilungile ekuhlolweni kwe-hyperglycemia ye-acute.
Ukuhlolwa okungasebenzi kwabesifazane abakhulelwe. Izithombe ezinokubukwa zingabonakala kuphela ngenyanga ye-8-9, kuyilapho izinkinga zivele zikhanya ku-trimester yesibili. Kuneziguli ezinokuxhumeka okunciphisiwe phakathi kwe-HbA1C nokufundwa kweglucose.
Okubi kufaka phakathi izindleko zokuhlolwa: inani eliphakathi lezinsizakalo ngama-ruble angama-520 kanye namanye ama-ruble ayi-170 kuyizindleko zokusampula kwegazi nge-venous. Akusizo zonke izifunda ezinethuba lokuhlolwa.
Kungani kufanele uvivinye?
IHemoglobin iprotheni equkethe i-iron futhi enekhono lokuthwala umoya-mpilo emzimbeni wonke. Amangqamuzana egazi abomvu womzimba ahlala izinyanga ezi-3-4 kuphela, kunengqondo ukuthatha isivivinyo se-HbA1C ngomvamisa onjalo.
Ukusabela okubambezelekile kwe-non-enzymatic kunikeza isibopho esiqinile se-glucose ne-hemoglobin. Ngemuva kwe-glycation, kwakheka i-glycosylated hemoglobin. Ubungako bokusabela kuncike ekufundweni kwemitha esikhathini sokulawula. I-HbA1C ikuvumela ukuthi uhlole ukwakheka kwegazi ngezinsuku ezingama-90-100.
Ngaphambi kokuhlolwa okujwayelekile, abanesifo sikashukela abaningi “bathatha ingqondo,” bezama ukuthuthukisa isithombe sezivivinyo. Lapho kuhlolwa i-HbA1c, lobu buqili abusebenzi, wonke amaphutha ekudleni nasezidakamizweni azonakwa.
Izici zendlela yokufinyeleleka okusha kule vidiyo ziphawulwe nguProfesa E. Malysheva:
Ngaphandle kwezimpawu zesifo sikashukela, amanani we-HbA1C ayashintshashintsha ebangeni le-4-6%. Babalwa ngokuqhathaniswa nenani eliphelele lamangqamuzana egazi abomvu egazini. Lesi sikhombisi sikhombisa i-carbohydrate metabolism enhle.
Amathuba okuthola isifo "esimnandi" anda ngamanani we-HbA1C asuka ku-6.5 aye ku-6.9%. Uma banqoba umkhawulo we-7%, lokhu kusho ukuthi i-lipid metabolism ayithinteki, futhi izinguquko zikashukela zixwayisa nge-prediabetes. Imikhawulo ye-glycated hemoglobin (ejwayelekile kwisifo sikashukela) ihluka ngezinhlobo ezahlukahlukene zesifo sikashukela kanye nezigaba zeminyaka ehlukene. Lo mehluko ubonakala kahle etafuleni.
Kungcono ukuthi abantu abasha bagcine i-HbA1C yabo iphansi kunoshukela lapho sebekhulile. Ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycated kwabesifazane abakhulelwe kunengqondo kuphela izinyanga eziyi-1-3, ngokuzayo, izinguquko ze-hormonal azinikezi isithombe esifanele.
I-HbA1C ne-hemoglobin ebulalayo
IFalog hemin inqoba ezinganeni ezisanda kuzalwa. Ngokungafani nama-analogues, leli fomu lidlulisela kahle i-oxygen emangqamuzaneni. Ingabe i-hemoglobin ebulalayo iyabuphazamisa ubufakazi?
Okuqukethwe komoya ophefumulwayo osegazini kusheshisa izinqubo ze-oxidation, futhi ama-carbohydrate aguqulwa abe yi-glucose ngokwengeziwe ngokushintshashintsha okuhambisanayo ku-glycemia. Lokhu kuthinta ukusebenza kwamanyikwe, ukukhiqizwa kwe-insulin kanye ne-glycated hemoglobin yesifo sikashukela.
Imininingwane yokuhlolwa kwe-hemoglobin ye-glycated - kuvidiyo:
Inzuzo ebalulekile yokuhlolwa kwe-hemoglobin ye-glycosylated ukungabi bikho kwesidingo sokulungiselela noma amathuba okuyiqhuba ngesikhathi esikahle. Izindlela ezikhethekile zenza kube nokwenzeka ukuthola isithombe esinokwethenjelwa kungakhathaleki ukudla noma umuthi, izifo ezithathelwanayo, izingcindezi, noma ngisho notshwala.
Ukuze uthole isithombe esinemiphumela ebonakalayo, kunconywa ukungavumeli ukudla kwasekuseni, ngoba isiguli, njengomthetho, sihlolwa ngokuphelele, futhi lokhu kungathinta ezinye izivivinyo. Ngosuku noma ezimbili usuvele uthole umphumela. Ekubonisaneni ne-endocrinologist, udinga ukumazisa ngesifo sakho se-anemia, izifo ze-pancreatic kanye nokusetshenziswa kwamavithamini.
Imiphumela yokuhlola ingahluka lapho ukhetha amaelebhu ahlukene. Kuya ngezindlela ezisetshenziswa esikhungweni sezokwelapha. Ukulandela umkhondo wamandla wokuthuthuka kwalesi sifo, kungakuhle ukuthi wenze ukuhlola ngaso sonke isikhathi endaweni efanayo. Kubalulekile ukuhlolwa njalo: kumisiwe emtholampilo ukuthi ukwehla kwe-HbA1 ka-1% kufanele kunciphise amathuba ezinkinga.
Uhlobo lwe-LED Izinkinga ezingaba khona Ukuncishiswa kwengozi,%
Thayipha isifo sikashukela sokuqala I-retinopathy
Thayipha isifo sikashukela sesi-2 I-Micro and macroangiopathy
Ukufa ngenxa yesifo sikashukela
Ingabe i-HbA1 encishisiwe iyingozi?
Inani le-HbA1 elingejwayelekile kwesifo sikashukela lisho i-hypoglycemia. Lokhu okweqile kutholakala kancane kunokudlula okujwayelekile. Ngezinyo elimnandi, ngokuhlukumezeka njalo kwamaswidi, ama-pancreas asebenzela ukugqoka, akhiqize inani elikhulu le-hormone. Izimfuneko zokuphambuka kungama-neoplasms lapho ama-b-cell akhiqiza khona i-insulin ngokweqile.
Ngaphezu kwesifo sikashukela kanye nokuthandwa kwe-Cort izinyo elimnandi, kunezinye izizathu ze-HbA1 ephansi:
Ukudla okuhlala isikhathi eside kwe-carb
Izifo ezihlangene ne-glucose engabekezelelwa,
I-renal ne-hepatic pathologies,
Imithwalo yemisipha enganele
Ukuthola izimbangela ezithile ezithinta izinga le-hemoglobin ye-glycated ku-mellitus yesifo sikashukela, kuyadingeka ukuthi kuhlolwe ngokuphelele.
Ngokwesigaba sabanesifo sikashukela esinobude besikhathi sokuphila esibalelwa eminyakeni emi-5, i-HbA1 izoba yinto efinyelela ku-8%, ngoba maningi amathuba okuba ne-hypoglycemia ukwedlula ukusongela kwesifo sikashukela. Ebusheni nasebusheni kanye nangesikhathi sokukhulelwa, kubalulekile ukuyigcina i-HbA1C ifike ku-5%.
Izizathu ezinyusa ukwanda kwe-HbA1
Ukudlula esimweni esivamile se-glycated hemoglobin ngohlobo 1 noma uhlobo 2 sikashukela kungasho i-hyperglycemia. Izifo ze-pancreatic zivame ukutholakala lapho ukuhlaziya kwe-HbA1 kungaphezulu kwe-7%. Izinkomba ze-6-7% zibonisa ukungabekezeleli kwe-glucose nokungahambi kahle komzimba.
Kwabesifazane abakhulelwe nezingane, ukubheka i-glycated hemoglobin akubalulekile kangako kubantu abadala. Uma ungazinaki lezi zincomo, ukukhubazeka ekwakhekeni kwesibeletho, ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi, kanye nokuwohloka kwempilo yowesifazane kungenzeka. I-hemoglobin ephansi kulesi sigaba iyinkinga evamile, ngoba izidingo zabo zensimbi ziphakeme kakhulu (kufinyelela ku-15 - 18 mg).
I-Hyperglycemia itholakala hhayi kuphela ngezindlela ezahlukahlukene zesifo sikashukela, kodwa futhi nangezifo ze-gland yegland, ukwehluleka kwesibindi, ukuphazamiseka kwe-hypothalamus (okuyingxenye yobuchopho obhekene nomsebenzi wezindlala ze-endocrine).
Uma izingane ziphakamisile (kusuka ku-10%) i-glycated hemoglobin, kuyingozi ukuyibhubhisa phansi kanzima, ingane izolahlekelwa umbono wayo kuze kube ubumpumputhe. Uma inkinga ngokwayo ingaxazululwa isikhathi eside, ingancishiswa ngemithi nge-1% ngonyaka.
Ukulawulwa kwe-glycemic ekhaya
Nganoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela, isimo segazi lakho kufanele sihlolwe nsuku zonke ukuze silungise umthwalo, ukudla noma umthamo wezidakamizwa uma kunesidingo. Imitha ejwayelekile ihlola ushukela wokuzila, amahora amabili ngemuva kokudla kwasekuseni, ngaphambi nangemva kokudla kwakusihlwa nasebusuku.
Ngohlobo 2 sikashukela, uma isiguli singatholi imijovo ye-insulin, izinqubo ezi-2 ezinjalo zanele. Ukuphindaphindwa kwesiguli ngasinye kunqunywa udokotela. Imiphumela ye-glucometer diabetesics iqoshwa kudayari ukuhlola iphrofayili ngokuguquguqukayo. Kunconywa ukuhlola ushukela ngesikhathi sokukhulelwa, ngesikhathi sokuhamba, ngomzimba noma ngokweqile ngokomzwelo.
Uma isifo sikashukela sesivele sitholakala futhi sithuthuka, akufanele unqunyelwe ekuhlolweni okukodwa kwe-HbA1C. Akubonisi ushintsho ekwakhekeni kwegazi ngomthwalo we-carbohydrate, kusiza ukuguqula ngokunembile indlela yokuphila.
Abanye abanesifo sikashukela abalawuli i-glycemia, bachaza isinqumo sabo ngokuthi ukuphazamiseka okungadingekile kuthinta kabi idatha yokulinganisa.
Okushiwo imiphumela yokuhlolwa kungaqondakala etafuleni.
I-HbA1C,% IGlucose, mmol / L I-HbA1C,% IGlucose, mmol / L
Ungawagcina kanjani ushukela wakho we-plasma
Ukuncoma okuhlelekile kudinga ukuthi i-HbA1C yesifo sikashukela ibe ngaphansi kuka-7%. Kulesi simo kuphela, isifo sikashukela sinxephezelwa ngokuphelele, futhi ubungozi bezinkinga buncane.
Ngokwengxenye, umsoco we-carb ophansi uxazulula le nkinga, kepha isilinganiso sesinxephezelo sikashukela sihlobene ngqo nokuvela kwezimo ze-hypoglycemic. Ubuciko bokuzwa ibhalansi phakathi kwezinsongo ze-hypoglycemia ne-hyperglycemia, onesifo sikashukela ufunda impilo yakhe yonke.
I-hemoglobin ye-Glycated iyidatha yezinsuku ezingama-90-100, futhi akunakwenzeka ukuyinciphisa ngesikhathi esifushane, futhi iyingozi. Isimo esiyinhloko sokunxeshezelwa kwe-glycemia kanye nokuvinjwa kwezinkinga ekuphazamiseni i-carbohydrate metabolism ukunamathela ngokuqinile ekudleni.
Ukudla okuphephe kakhulu yiprotheni: inyama, inhlanzi, amaqanda, imikhiqizo yobisi, ngaphandle kwalokho umzimba awukwazi ukuba khona ngokujwayelekile.
Ezithelweni zezithelo nemifino, kungcono ukhethe lezo ezikhula ngaphezu kwenhlabathi: ukhukhamba, iklabishi, i-zucchini, ukwatapheya, ama-apula, ulamula, amakhokho. Izilimo eziyizimpande nezithelo ezimnandi (amagilebhisi, ubhanana, amapheya) kudliwe ngesizini kungabi ngaphezu kwe-100 g futhi ngokuhlukile neminye imikhiqizo.
Ama-diabetes kanye nama-legumes awusizo, i-peas nayo ingadliwa eluhlaza. Ama-pods obhontshisi ayithuluzi elifakazelwe lokwehlisa ushukela.
Uma unesifiso esingenakuphikwa sokudla into emnandi, kungcono ukuthatha izikwele ezimbalwa (30 g) zeshokolethi omnyama omnyama (okungenani u-70% cocoa) kunokhokho okuthiwa yi-candy kwabanesifo sikashukela esine-fructose.
Kubathandi bezinkozo, kungcono ukhethe ama-carbohydrate aphambili, adonswa isikhathi eside futhi acutshungulwa kangcono. IBarley inenkomba ephansi ye-glycemic, kepha iqukethe i-gluten. Irayisi elinsundu, i-lentil, i-buckwheat kanye nama-oats kwesinye isikhathi kungafakwa ekudleni.
Ukudla kufanele kube ngokufiphala, kuze kube kasithupha ngosuku. Amaprotheni nama-carbohydrate adliwa kakhulu ngokwahlukile. Ukwelashwa okushisa kwemikhiqizo - mnene: ukubamba, ukubhaka, ukubamba.
Ukulawula isisindo, imizwa, inhlala-kahle, futhi, ushukela, kubalulekile ukuthuthukisa futhi ukwenza njalo emoyeni omusha isethi sakho sokuzivocavoca, ucabanga ngobudala nempilo.
Ukuqashwa njalo kwe-hemoglobin ye-glycosylated ku-mellitus yesifo sikashukela kuyisidingo sokuthola isinxephezelo se-glycemic. Ukuhlukumezeka okwembulwe ngesikhathi kusiza ukulungisa uhlobo lokwelashwa, ukuvikela izinkinga ezinzima zesifo sikashukela. Ukuhlolwa kwe-HbA1 kufakwa yi-European Association of Endocrinologists emkhakheni wezimpawu zokugunyazwa zokuthola isifo sikashukela.
Ngemininingwane engaphezulu kwendlela yokuhlola ye-HbA1, bona ividiyo:
Ukuhlolwa kwegazi kwe-glycated hemoglobin kubonisani?
Lokhu kuhlaziya kukhombisa ushukela wegazi ojwayelekile ezinyangeni zokugcina ezingama-3-4.
Hba1c isibonakaliso esizinzile esingathintwa yisikhathi sosuku, ukusebenza ngokomzimba, noma usuku olwandulela ukudla, noma isimo sokomoya.
Ikuvumela ukuthi usicacisele kahle leso simo uma ushukela wegazi ususondele kokujwayelekile. Kepha inkomba ebaluleke kakhulu ye-HbA1c kubantu abanesifo sikashukela, ngoba kukuvumela ukuthi uhlole izinga likashukela egazini, hhayi kuphela ngesikhathi sokulinganisa nge-glucometer, kodwa futhi nokuyikhomba ukunyakaza okulandelayo. Isibonelo, i-hypoglycemia ebusuku.
Ngokusekelwe kulokhu kuhlaziywa, udokotela angakwazi ukuhlola ukusebenza kahle kwezindlela zokwelashwa nokudla, futhi alungise nokwelashwa, uma kunesidingo.
Futhi, izinga le-hemoglobin ye-glycated lingasetshenziswa ukuthola i-mellitus yokuqala yesifo sikashukela.
Kungani i-glycated hemoglobin ikhombisa ushukela wegazi ezinyangeni ezi-3 ezedlule, kanti hhayi, ngokwesibonelo, ezi-6?
Amangqamuzana egazi abomvu anesikhathi sokuphila esiyizinsuku eziyi-120. Kungakho i-hemoglobin ye-glycated ikhombisa ukuthi isilinganiso segazi lomuntu sasingakanani ezinyangeni ezi-4 zokugcina ngaphambi kokuhlaziywa.
Izimbangela Zamazinga Akhuphuka we-hemoglobin we-Glycated
Isizathu esikhulu sokwanda kwe-hemoglobin ye-glycated izinga likashukela egazini (ushukela). Lapho likhuphuka izinga likashukela egazini, yilapho lihlangana khona ne-hemoglobin futhi likhuphula izinga le-hemoglobin ye-glycated.
Ngokwenyuka kwe-glycemia ngokwesilinganiso esingu-2 mmol / L, HbA1c ukhula ngo-1%.
Kwezinye izimo ukwanda okungamanga kwe-hemoglobin ye-glycated kungahle kube ngenxa:
Ukwanda kwegazi ukubona (hematocrit)
Isibalo samaseli abomvu aphezulu
Ukuntuleka Kwe-Iron An-An-Anemic
Izimbangela zeHemoglobin ephansi
Njengoba kushiwo ngenhla, lapho kukhuphuka izinga likashukela wegazi, kuphakama i-hemoglobin ye-glycated. Kunjalo futhi ngokuhleleka okuphambene.
Yehlisa ushukela wegazi lakho, yehlise i-HbA yakho1c.
Kubantu abanesifo sikashukela, ukwehla kwe-hemoglobin ye-glycated, ikakhulukazi ngokumangazayo, kungabonisa i-hypoglycemia.
I-Hypoglycemia Ngabe isimo lapho ushukela wegazi wehla khona ngaphansi kuka-3,5 mmol / L. Lesi simo siyingozi empilweni, nasezimweni ezinzima, nasempilweni.
Ngeshwa, abanye abantu abanesifo sikashukela kungenzeka bangayiboni i-hypoglycemia. Ikakhulu uma kwenzeka ebusuku. Futhi lapha kubalulekile ukunaka izinga eliphansi le-hemoglobin engenangqondo. Lokhu kuzovumela udokotela ukuthi alungise umthamo wamathebhulethi noma i-insulin ngesikhathi ukuze ugweme imiphumela eyingozi ye-hypoglycemia.
Futhi, amazinga we-hemoglobin aphansi we-glycated angahlanganiswa nawo izifo zegazilapho amangqamuzana abomvu egazi abola ngokushesha, noma abe ne-pathological, noma abe ne-hemoglobin encane. Izifo ezinjalo, ngokwesibonelo, yilezi:
I-anemia (ukushoda kwensimbi, ukuntuleka kwe-B12, i-anaplastic)
Isimo ngemuva kokususwa kwe-spleen
Ukwehluleka kwezinso okungamahlalakhona
Izinga le-glycated hemoglobin kwabesifazane abakhulelwe
Kwabesifazane abakhulelwe, i-glycated hemoglobin kufanele ibe njalo ngaphansi kuka-5.6%.
Uma kutholakala owesifazane okhulelwe Hba1cngaphezulu kuka-6.5% lapho ke kutholakala ukuthi unesifo sikashukela esisanda kutholwa.
Kodwa-ke, ukukhulelwa kuba njalo lapho ungakwazi ukugxila kuphela ku-glycated hemoglobin, kanye nokulawula izinga loshukela wegazi. Lokhu kungenxa yokuthi ngesikhathi sokukhulelwa kukhona ubungozi bokukhula isifo sikashukela sokukhulelwa noma isifo sikashukela esikhulelwe.
Ukungafaki lesi simo, kubalulekile ukuhlaziya i-plousma ye-venous yokuzila ushukela, kanye namahora ama-1 kanye nama-2 ngemuva kokuthatha u-75 mg we-glucose. Kubizwa ngokuthiukuhlolwa kokubekezelela i-glucose (OGTT).
I-OGTT iyaphoqeleka emavikini angama-24-26 wokukhulelwa.
Izinkomba ukuzila kwe-venous plasma glucose kowesifazane okhulelwe kanye nemibandela ehlobene:
Norm ≤5.1 mmol / L
Isifo sikashukela sokutholwa kwesisu 5.1-7.0 mmol / L
Isifo sikashukela mellitus > 7.0 mmol / L
Izinga le-glycated hemoglobin kushukela
Kubantu abanesifo sikashukela, amazinga okuhlosiwe we-glycated hemoglobin asetwa udokotela ngokuya ngeminyaka, ubunzima besifo sikashukela, izifo ezihambisana namanye amazinga amaningi. Lezi zibalo zingahluka kusuka ku-6.5% zize zifike ku-8.0-8.5%.
Noma kunjalo, ucwaningo luye lwabonisa ukuthi lapho kulawulwa kangcono ushukela wegazi, kuba nezinkinga ezincane zesifo sikashukela futhi kube ngcono impilo elandelayo yomuntu onesifo sikashukela.
Kuhleokuhlosiwe amanani we-HbA1c ngoba abantu abanesifo sikashukela yilezi:
Kwabantu abasha abahluphekayo Uhlobo 1 sikashukela ≤6,5%
Kubantu asebekhulile abahluphekayo Uhlobo 2 sikashukela ≤6,5-7,0%
Kwabesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela ≤6,0%
Ungahlolwa kanjani i-hemoglobin ye-glycated?
Ukuhlolwa kwegazi kwe-glycated hemoglobin kungathathwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Akudingi ukuqeqeshwa okukhethekile, kufaka phakathi, akudingi ukuthathwa esiswini esingenalutho.
Njengoba kushiwo ngenhla, i-HbA1c isibonakaliso esizinzile esingathintwa yisikhathi sosuku, ukusebenza ngokomzimba, noma usuku olwandulela ukudla, noma isimo sokomoya.
Kungakho lokhu kungukuhlaziywa okulula kakhulu kokubheka noma ukuthola isifo sikashukela.
Ukuhlaziywa kweshukela glycated
Isifo sikashukela sidinga ukuthatha ukuhlaziywa okunjalo amahlandla amane ngonyaka (noma kanye njalo ezinyangeni ezintathu). Ngalesi sikhathi, kulinganiswa izinga likashukela wegazi, kanye namandla alo. Ukuhlaziya ushukela we-glycated ukuthi unganikela kanjani kahle? Kuhle kakhulu ekuseni, ngesisu esingenalutho. Uma isiguli sinomlando wokumpontshelwa igazi noma kube nokulahleka okukhulu kwegazi esikhathini sokugcina, khona-ke imiphumela ingaba ngethembekile. Ezimweni ezinjalo, umzimba udinga isikhathi sokululama - okungenani izinyanga ezintathu.
Udokotela ngamunye weluleka iziguli zakhe ukuthi zithathe izivivinyo ze-hemoglobin ze-glycated elabhoratri efanayo. Isikhungo ngasinye esinjalo sinokuhlukahluka kwaso ekusebenzeni. Ngokuyinhloko, akubalulekanga, kepha ekuxilongeni kokugcina kungadlala indima.
Ukwanda ushukela akuhlali njalo kunomthelela ongemuhle enhlalakahleni, ngakho-ke akunakwenzeka ukusungula ngokushesha isithombe sikashukela. Ngalesi sizathu, ukuhlaziya ushukela we-glycated, okungenani kwesinye isikhathi, kufanele kudluliselwe kuwo wonke umuntu obheka impilo yakhe.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, lolu cwaningo lunezinzuzo eziningana ngokuqhathaniswa nokuhlaziywa okujwayelekile kwe-biochemical:
Ngokuyinhloko, ukuhlaziywa kungenziwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku, ngisho nangemva kokudla. Yize isesiswini esingenalutho, izinkomba zizoba ngokunembile.
Yile ndlela enikeza ithuba lokuthola isithombe esiphelele futhi aqaphele izigaba zokuqala zesifo sikashukela. Ngokuvumelana nalokho, thatha izinyathelo ezidingekayo.
Akukho kulungiselelwa okukhethekile okudingekayo ekuhlaziyeni ushukela we-glycated; amasampula egazi angenzeka nganoma yisiphi isikhathi, ngesikhathi esifushane kakhulu.
Le ndlela inikeza umbono we-100% wokuthi isiguli sinaso yini isifo sikashukela, ngisho nasezigabeni zokuqala kakhulu.
Isimo esingokomzimba noma esingokomzwelo sesiguli nganoma iyiphi indlela sithinta ukunemba kwemiphumela yokuhlaziywa.
Ngaphambi kwenqubo yokuhlola amasampula egazi, asikho isidingo sokwenqaba ukuthatha imishanguzo edingekayo, ephuzwa njalo.
Konke okungenhla kukhombisa ukuthi lokhu kuhlaziya akudingi kulungiselelwa okukhethekile, kunikeza isithombe esinembile kakhulu sesi sifo. Lokhu akufaki zonke izici ezithinta ukufunda.
Uma sikhuluma mayelana nokushiyeka kokuhlaziywa kweshukela glycated, ngeshwa, ayatholakala. Nazi zokuqala eziyisisekelo:
Uma kuqhathaniswa nokuhlola ushukela kwegazi okujwayelekile, lolu cwaningo lubiza kaningana.
Imiphumela inganikeza izinkomba ezingalungile ezigulini ezihlushwa i-hemoglobinopathy kanye ne-anemia.
Akusizo zonke izifunda ezise-laboratories ezenza lokhu kuhlaziywa, ngakho-ke azitholakali kubo bonke abahlali bakuleliya lizwe.
Imiphumela yocwaningo ingancishiswa ngemuva kokuthatha umthamo omkhulu wamavithamini E noma uC.
Uma isiguli sinezinga elikhulayo lama-hormone egilo, khona-ke noma ngabe izinga likashukela wegazi lilijwayelekile, umphumela ku-hemoglobin ye-glycated ungahle ube ngaphezulu.
Izici ezithinta Umphumela
Ukuthola lokho kuhlaziya ngeke kuthathe isikhathi esiningi. Futhi nokho, njengoba ubuchwepheshe bokunquma amazinga kashukela buyahlukahluka, kungcono ukwenza uhlaziyo amahlandla ambalwa.
Uma isilinganiso sikashukela se-glycated sinqunywa kuma-diabetes, kubalulekile ukuqaphela ukuthi kubantu ababili abahlukene abanenani elifanayo le-glucose, ushukela we-glycated ungahluka ngephesenti elilodwa.
Kwezinye izimo, ukuhlaziywa kungakhiqiza imiphumela engamanga (iphutha kuze kufike ku-1%) uma i-hemoglobin ye-fetus yehliswa noma ikhuphuka.
Izifundo eziningi zesayensi zikhombe izizathu eziningi ezingathinta imiphumela yokuhlaziywa kweshukela glycated:
Isisindo somzimba sesiguli.
Kukhona ezinye izizathu ezithinta ukuthembeka komphumela. Yize ukuhlaziya kungenzeka kunoma yisiphi isimo, ukuze uthole isithombe esithembeke ngokwengeziwe, kungcono ukusenza ngesisu esingenalutho, ngaphandle kokuzivocavoca umzimba.
Izinga likashukela elilinganiselwe
Ithebula likashukela eline-glycated lizosiza ekuhloleni umphumela wokuhlaziywa bese ufinyelela iziphetho ezithile.
I-carbohydrate metabolism ejwayelekile emzimbeni. Ithuba le-Zero lokuthola isifo sikashukela.
Isikhombi singeqi ngaphezulu. Kunconywa ukudla okunempilo
Amathuba okuthola isifo sikashukela aphakeme. Kunconywa ukudla okuqinile nokuvivinya umzimba ngokulinganayo.
Ukuba khona kwalesi sifo. Ukuqinisekisa ukutholakala kwale sifo, kunikezwe izifundo eziningi ezingeziwe.
Isifo sikashukela kufanele sithathe ukuhlolwa kwegazi glycated njalo ngoshukela. Lokhu kumele kwenziwe ukubheka isimo somzimba njalo.
Uma kwenzeka kunesifo sikashukela sohlobo lokuqala, lokhu kuhlaziya kudingeka kakhulu ukwenza okungenani izikhathi ezine, ngesifo sikashukela sohlobo lwesibili - okungenani amahlandla amabili.
Ezinye iziguli zeqa lokhu kuhlaziya, ngamabhaxa zesaba ukuveza izinkomba zazo ezidlule. Othile uvila kakhulu nje ukuthi angazihlaziya futhi anganaki impilo yakhe. Lokhu ngokuphelele akunakwenzeka. Ukukhonjwa ngesikhathi kwezizathu zesikhombisi se-overestimated kwenza sikwazi ukulungisa ukwelashwa futhi sinikeze isiguli isimo sempilo esihle.
Ngesikhathi sokukhulelwa, abesifazane kudingeka benze lolu cwaningo. Izinkomba ezingabukelwa phansi ziholela ekubambezelelekeni kokukhula kwesibeletho. Ukuhushula isisu kungenzeka futhi kwenzeke. Kulokhu, lesi simo sidinga ukulawulwa ngokuqinile.
Ezinkomba zezingane ngokweqile esikhathini eside nazo ziyingozi kakhulu. Uma inkomba idlulwa ngamaphesenti ayi-10, akunakuphikwa ukuthi wehlise izinga ngokweqile. Ukugxuma okubukhali phansi kungaholela ekusebenzeni okungaboni kahle, kunciphise umbono bese kuthi kamuva kulahlekelwe ngokuphelele. Kuyadingeka ukunciphisa inkomba kancane kancane, ngamaphesenti angu-1 ngonyaka.
Ukuze ulondoloze izinga elijwayelekile le-hemoglobin ejwayelekile, udinga ukubheka amazinga kashukela njalo, ukubonana nodokotela ngesikhathi, nokuhlolwa.
Imiphumela yesilinganiso esikhuphukayo
Amazinga kashukela abhalwe phansi kufanele abhekwe njalo. Uma isikhathi eside inkomba iphezulu kakhulu, khona-ke lokhu kuholela ezinkingeni ezilandelayo:
I-Pathology yemithambo yegazi nenhliziyo.
IHemoglobin ayihambelani nomsebenzi wokuhambisa ukuthunyelwa komoya-mpilo, ngenxa yalokho, i-hypoxia yezitho nezicubu iba khona.
Kwabesifazane abakhulelwe, ingozi yokubeletha inkulu kakhulu noma ingane efile.
Ezinganeni, ukubonakaliswa kwesifo sikashukela esincike ku-insulin kungenzeka.
Imiphumela yesilinganiso esiphansi
Uma ushukela we-glycated uphansi kakhulu, khona-ke ubungozi bemiphumela engemihle elandelayo:
Ukudonswa kwezidakamizwa okwehlisa amazinga kashukela.
Ukopha okuhlala kwenzeka.
Isidingo esihlala sikhona sokumpontshelwa igazi.
Isiguli kufanele silandele ekudleni okuphansi kwe-carb isikhathi eside.
Mhlawumbe ukuthuthukiswa kwezifo ezingandile, njengesifo sikaHerce, isifo sika-von Girke, ukungabekezelelani kwe-fructose.
Abesifazane abakhulelwe bangaba nengane efile noma bazalwe ngaphambi kwesikhathi.
Uma imiphumela yokuhlolwa ushukela we-glycated ikhombisa izinkomba ezedlulele noma ezinganakwa, kufanele uthintane nodokotela wakho kuqala. Udokotela kuphela ongaxilonga kahle futhi anikeze inkambo edingekayo yokwelashwa. Imvamisa, indlela yokwelashwa ifaka izinto ezilandelayo:
Ukudla okunempilo ngokulinganayo.
Wathuthukisa umsebenzi ngokomzimba oludingekayo.
Ngokuqondene nokudla, kunezincomo ezibaluleke kakhulu:
Ukubekwa phambili kwezithelo nemifino ekudleni. Lokhu kuzosiza ukugcina amazinga kashukela evamile.
I-Fibre (ubhanana, ummbila) ilusizo kwabashukela.
Ubisi oluncane kanye neyogathi, i-calcium ne-vithamini D kuqinisa uhlelo lwamathambo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2.
Amantongomane, inyama yenhlanzi. I-Omega-3 ilawula amazinga kashukela, anciphisa ukumelana ne-insulin.
Kunqatshelwe ngokuphelele ukusebenzisa:
Konke lokhu kuholela ekugxumeni okubukhali emazingeni kashukela ekuhlaziyeni.
Ukuzivocavoca i-aerobic kunciphisa ngokushesha amazinga kashukela, ngakho-ke kunconywa kubo bonke abantu, hhayi iziguli nje. Isimo somzwelo naso sibaluleke kakhulu futhi sidlala indima ebalulekile ekuvumelwaneni kwezinkomba zokuhlaziywa.
Kunoma ikuphi, ungesabi ngemuva kokuthola imiphumela kushukela glycated. Izici eziningi zithonya izinkomba. Izizathu zokwanda noma ukwehla kwalelo zinga zingachazwa udokotela kuphela.
Kungani kufanele uhlolwe igazi nge-HbA1c
IGlycated hemoglobin (HbA1c) ikhiqizwa ngenxa yokusabela okukhethekile kokuphilayo. Ushukela ne-amino acid zihlangana ngaphansi kwethonya lama-enzyme. Ngenxa yalokhu, kwakheka isakhi se-hemoglobin-glucose. Kungatholwa izindlela zokuxilonga. Ijubane lokuphendula okunjalo lihlukile. Kuya ngenani lezinto ezidingekayo emzimbeni.
Ku-diabetes, amazinga kashukela egazi aphakeme kunokujwayelekile. Ngenxa yalokhu, ushukela we-glycated wakheka ngokushesha kunokuba kumuntu ophilile. Ngokulinganisa lelijubane, ungaqinisekisa ukuba khona kwalesi sifo kanye nesigaba sokukhula kwaso.
Ukuhlolwa kwegazi kwe-HbA1c kukuvumela ukuthi uhlole ukuthi isiguli sisilawula kahle kangakanani lesi sifo.
Inzuzo enkulu yokuhlaziywa kweshukela glycated ukungabikho kokulungiselela. Ukuhlaziywa kwe-HbA1c kungathathwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Le ndlela ihlinzeka ngemiphumela ethembekile yize kukhona amakhaza, ukudla nemithi elwa namagciwane, ukusebenza ngokomzimba, isimo sokomoya somguli nezinye izinto ezicasulayo.
Lapho enquma ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycated, udokotela kufanele azise ngokuthatha i-vitamin complexes, kuveze ukungasebenzi kahle kwegazi emzimbeni kanye nokulimazeka kwepancreatic. Konke lokhu kungathinta ukunemba kocwaningo.
Isiguli esiza elabhorethri sithatha isampula yegazi emthanjeni (kwesinye isikhathi kusuka emunweni). Ukuthola umphumela ofanele kakhulu, inqubo iyaphindwa izikhathi ezingama-8. Izinkomba ziqashwa okungenani isikhathi esingu-1 ngeviki. Imiphumela izolunga ezinsukwini ezingama-3-4.
Ukuhlaziywa kwe-hemoglobin ye-glycated kwenziwa ngamandla amakhulu izinyanga eziningana. Lokhu ubude bomjikelezo wempilo weseli elibomvu legazi.
Ngezinga eliphansi le-hemoglobin ye-glycated (hhayi ngaphezu kwama-5.7%), kungashiwo ukuthi azikho izinkinga zokuphazamiseka emzimbeni. Kulokhu, udinga ukuthatha ukuhlaziywa kwe-1 isikhathi seminyaka emithathu. Uma inkomba isebangeni le-5.7-6.6%, amathuba okuthola ushukela akhuphuka. Isiguli sidinga ukuhlaziywa okunjalo njalo ngonyaka. Ukudla okune-carb ephansi kusiza ukunciphisa izingozi.
Inkomba efinyelela ku-7% ikhombisa ukuba khona kwalesi sifo. Noma kunjalo, esimweni esinjalo, isiguli simlawula kahle. Ukuhlaziywa okuphindwayo kunconywa kanye ezinyangeni ezi-6.
Uma isifo sikashukela sitholwa muva nje futhi ukwelashwa kusanda kuqalwa, ukuhlolwa kwezokwelashwa kufanele kwenziwe kanye njalo ezinyangeni ezi-3.
Ngesikhathi sokukhulelwa, ucwaningo lwenziwa kuphela ku-trimester yokuqala. Esikhathini esizayo, izinguquko eziningi zizokwenzeka emzimbeni womama okhulelwe. Ukuhlaziywa kwe-HbA1c ngeke kunikeze imininingwane efanele.
Izinkomba zikashukela we-glycated ziyahlukahluka ngokuya ngeminyaka yesiguli, uhlobo lwesifo nezinye izici. Ezinganeni, zihambisana nesimo esivamile somuntu okhule aze afike eminyakeni engama-45. Ukuphambuka okuncane kwamanani ohlangothini oluncane kwamukelekile.
Ngokuvamile, isilinganiso se-HbA1c sinqunywa njengephesenti.
Izinga le-hemoglobin ye-glycated ku-Type 1 sikashukela
Ngohlobo 2 sikashukela
Yabantu abaphilile abangaphansi kweminyaka engama-45
Yabantu abaphilile kusuka kwabaneminyaka engama-45 kuye kwengama-65
Kubantu abaphilile abangaphezu kweminyaka engama-65
Izizathu zokwanda nokwehla
I-Hypoglycemia (ushukela wegazi ophansi) ingaba yisizathu sokwehla kwe-hemoglobin ye-glycated. Futhi, i-insulinoma iyinto ethokozisayo. Lokhu ukwakheka kwamanyikwe akhiqiza i-insulin eningi kakhulu. Kulokhu, okuqukethwe ushukela kuyancipha, okubangela i-hypoglycemia.
Ngendlela efanayo izimbangela ezilandelayo zeshukela ezincishisiwe:
izifo ezingabalwa zofuzo
ukudla okungafanele ngokudla okune-carbohydrate ongaphezulu,
overdose yezidakamizwa esehlisa ushukela,
ukusebenza ngokweqile komzimba.
Amanani akhuphukayo awuphawu lwe-hyperglycemia. Lesi simo asihlali sikhombisa isifo samanyikwe. Amanani asuka ku-6.1 kuye ku-7% avame ukukhombisa isifo sikashukela, ukubekezelelwa kwe-carbohydrate, noma ukwanda kwe-glucose esheshayo.
Umphumela we-hemoglobin ebulalayo ekuhlaziyweni kwe-HbA1c
IFalal hemoglobin iyindlela ye-hemoglobin engatholakala emzimbeni wezingane emavikini okuqala empilo. Ngokungafani ne-hemoglobin yabantu abadala, inekhono elingcono lokuhambisa i-oksijini ngezicubu.
Ngenxa yokuqukethwe komoya ophezulu egazini, izinqubo ze-oxidative kwezicubu zishesha kakhulu. Ngenxa yalokho, ukuwohloka kwama-carbohydrate kuya ku-glucose kwenzeka ngokushesha okukhulu. Lokhu kuvusa ukwanda kokuhlushwa kashukela wegazi, kuthinta ukusebenza kwamanyikwe kanye nokukhiqizwa kwe-insulin. Ngakho-ke, imiphumela yokuhlaziywa kokushintsha kwe-hemoglobin ye-glycated.
Ukuhlolwa kwegazi kwe-HbA1c kunezinzuzo eziningi:
asikho isidingo sokunikela ngegazi esiswini esingenalutho,
ukuqina kokuqina: igazi lingagcinwa ku-vitro ngaphambi kokuhlolwa
ama-index we-glycated ushukela azimele ezifweni ezithathelwanayo, izingcindezi nezinye izici ezingezinhle,
ukutholwa okufika ngesikhathi kohlobo 1 lwesifo sikashukela,
ithuba lokuthola ukuthi isiguli sililondoloze kahle kangakanani ushukela wegazi ezinyangeni ezi-3 zokugcina,
ijubane lokuthola imiphumela: Ukuhlaziywa kwe-HbA1c kulula futhi kushesha kunokuvivinya ukubekezelelwa kwe-2-glucose.
Yini i- glycogemoglobin?
Iprotheni ye-hemoglobin iyingxenye eyinhloko yengqamuzana elibomvu legazi. Inesibopho sokunyakaza okujwayelekile komoya-mpilo kwizitho nezicubu, futhi futhi isusa nekhabhoni dayokisi emzimbeni.
Endabeni yokungena kushukela ngokusebenzisa ulwelwesi lwe-erythrocyte, ukuhlangana koshukela ngama-amino acid kuqala, ngenxa yalokho ukusabela kwenzeka. Ekupheleni kwayo, kuvela iprotheni ye-hemoglobin ye-glycated.
I-HbA1c protein, okuyisinkomba yenkambo ejwayelekile ye-carbohydrate metabolism futhi idlula ibanga elijwayelekile, ngokugcwala kwe-glucose ephezulu.
Ukuhlolwa kwe-glycogemoglobin edlulisiwe kunembile impela. Ukwehlukanisa imiphumela ileveli kashukela ezinyangeni ezintathu ezedlule njengephesenti.
Le miphumela isiza ekuboneni ukuqhubeka kwesifo sikashukela kusenesikhathi., ngisho nangaphambi kokuqala kwezimpawu.
Ezokwelapha, kunezinhlobo ezintathu eziphambili zesifo sikashukela, kanye nesimo esibizwa nge-prediabetes. Kulesi simo, amazinga ajwayelekile we-glycated hemoglobin akhuphuka ngaphezu kokujwayelekile, kepha ungafinyeleli amamaki okuthola kahle. Lezi yizinkomba ezisukela kumaphesenti ayi-6.5 kuya kwayi-6.9.
Ngamazinga kashukela egazi anjalo, isiguli siba nengozi yokuba nesifo sikashukela sohlobo 2. Kodwa-ke, kulesi sigaba, inkomba ingabuyiselwa emuva kunejwayelekile ngokudlala ezemidlalo nangokumisa umsoco ofanele.
Thayipha isifo sikashukela sokuqala. Umsuka wayo ucasulwa izifo zokugoma, ngenxa yalokho i-pancreas ihlanganisa i-insulin encane kakhulu, noma iyeke ukuwuveza nhlobo. Ezimweni eziningi, kubhalwe phansi ebusheni.
Ngokuqhubeka kwesifo sikashukela esinjalo, kuhlala nomuntu ophethe kukho konke impilo, futhi kudinga ukugcinwa njalo kwe-insulin. Futhi abantu abathintekile badinga indlela yokuphila eshukumisayo nokudla okunempilo.
Thayipha isifo sikashukela sesi-2. Kubonakala ikakhulukazi kubantu abanokukhuluphala ngeminyaka. Ingakhula nasezinganeni, ngokumelene nesizinda somsebenzi onganele. Ngokuvamile lolu hlobo lwesifo sikashukela luqoshwa (luye lungamaphesenti angama-90 amacala). Umehluko phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili ukuthi ekugcineni, i-pancreas ayakhiqizi i-insulin, noma ukuyisebenzisa ngendlela engafanele.
Ezimweni eziningi, kuba yindlela yokuphila yokuhlala phansi, ukukhuluphala ngokweqile kanye nokuntuleka komzimba. Ukudluliselwa okungenzeka kwalesi sifo ngefa.
Isifo sikashukela sokutholwa kwesisu. Luhlobo lwesifo sikashukela esingu-3, ​​futhi luyathuthuka kwabesifazane kusukela ezinyangeni ezintathu kuya kweziyi-6 zokukhulelwa. Ukubhaliswa kwesifo sikashukela komama abakhulelwe kungamaphesenti amane kuphela, kubo bonke abesifazane abakhulelwe. Ihlukile kwesinye isifo sikashukela ngoba inyamalala ngemuva kokuzalwa kwengane.
Imikhawulo ye-hemoglobin ephezulu ye-glycated ibonisa ukuthi kunokukhuphuka njalo kwamazinga kashukela. Okusho ngokungasebenzi kokulashwa kwesifo sikashukela. Kubuye kube yinkomba yokwehluleka ku-metabolism yama-carbohydrate.
Ithebula elingezansi lizosiza ukuhlola, ngokuya ngemiphumela yokuhlaziywa, inani loshukela egazini.
Imikhawulo yesimo se-hemoglobin ejwayelekile ivela ku-4 iye ku-6%. Umzimba omuhle we-carbohydrate metabolism kanye nengozi ephansi yokuqhubeka kwesifo sikashukela kubhekwa kumkhawulo we-hemoglobin ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile. Uma umaki udlula ku-6.5%, ubungozi besifo sikashukela bukhuphuka.
Lapho i-glycogemoglobin inemingcele engaphezu kwamaphesenti ayi-7, lokhu kukhombisa ukukhuphuka njalo kwenani likashukela, okubonisa isifo sikashukela i-mellitus.
Yiziphi izinkomba ezijwayelekile ngesikhathi sokukhulelwa?
Izinguquko emazingeni kashukela zijwayelekile kumama abakhulelwe. Lapho uthwala ingane, umzimba uthola izinguquko ezinkulu, futhi noshukela akakho njalo.
Ngesikhathi sokuzalwa kwengane, okujwayelekile kuphezulu kunokwejwayelekile,kepha akusona isimo sokugula:
Chance of Isisindo Basha Abantu abaneminyaka ephakathi nendawo Abantu abadala abanesikhathi sokuphila isikhathi esingaphansi kweminyaka emi-5
Ingozi mahhala Kufika ku-6.5% Kufika ku-7% Kufika ku-7.5%
Izinkinga ezinzima zingenzeka. Kufika ku-7% Kufika ku-7.5% Kufika ku-8%
Lapho umaki ufinyelela amaphesenti ayisishiyagalombili, izinga elinjalo le-hemoglobin eline-glycated libonisa ukwehluleka ukwelashwa nokulungiswa okudingekayo kokulashwa. Uma uphawu lufika kumaphesenti ayi-12, isiguli sidinga ukulethwa esibhedlela ngokushesha.
I-hemoglobin ejwayelekile ejwayelekile emaqenjini ahlukahlukene eziguli nakushukela mellitus
Izimpawu ze-hemoglobin ephezulu ye-glycated
Uma isiguli sinezikhalazo zenye yalezi zimpawu ezilandelayo, udokotela angasola isiguli esisolwa ngokwanda kwe-hemoglobin ye-glycated kanye nesifo sikashukela:
Ukuqina obuthakathaka, ukubabaza,
Ukuphuma komchamo ngokweqile, ngokunxenxa okungapheli,
Ukukhula okusheshayo kwesisindo somzimba,
Noma yiziphi lezi zimpawu ezingenhla zizothuthukisa udokotela ukuthi acabange ngokuhlolwa kwegazi, ukusola isifo sikashukela.
Kubalulekile ukungadideki izimo lapho i-hemoglobin ye-glycated idluliswa khona. Lokhu kungadala ezinye izifo.
Ezigulini ezisusile i-wle,
Ngokuntuleka kwensimbi emzimbeni,
I-hemoglobin ephezulu ye-fetus ezinganeni ezisanda kuzalwa.
Lezi zimo zomzimba zithinta ukwanda kwe-hemoglobin ye-glycated, kodwa ngokuhamba kwesikhathi bona ngokwabo baba yinto evamile.
Ungalawula kanjani izinga le-glycogemoglobin?
Abantu abanesifo sikashukela badinga ukuqapha ngokwabo amazinga kashukela wegazi ngokwabo.
Kungenzeka ukukala amazinga kashukela ekhaya usebenzisa imitha.
Kokubili udokotela obonayo kanye nomeluleki ekhemisi bangakhetha imodeli elula. Ama-Glucometer alula futhi kulula ukuyisebenzisa.
Kunemithetho ethile yokuzithiba ushukela:
Indawo yocingo kufanele iphathwe kahle nge-antiseptic, ukuvikela amagciwane,
Kukhona isampuli yegazi noma eyenzakalelayo yegazi, konke kuya ngemodeli ekhethiwe,
Ithonsi legazi elitholile lusetshenziselwa umucu wesikhombi,
Imiphumela ivela esikrinini ngemuva kwemizuzwana engu-5-10.
Kubalulekile kakhulu ukugcina ucingo ngokuya ngemiyalo, ugweme ukulimala ecaleni nokusetshenziswa okungalungile. Udokotela ohambelayo unquma imvamisa yezilinganiso zikashukela, kuye ngohlobo lwesifo sikashukela.
Ngohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, izilinganiso zenziwa izikhathi eziphindwe kayi-4 ngosuku, kanti ngohlobo lwesibili - amahlandla ama-2.
Isilinganiso se-glycated hemoglobin ku-glucose.
Ungakulungiselela kanjani ukuhlaziya?
Isikhathi sosuku lapho kudluliswa khona uhlaziyo aludlali, njengokudla kwakho nokuphuzile ngosuku olwandulele nangaphambi kokuhlaziywa uqobo. Isimo kuphela ukuthi awudingi ukuzilayisha ngokomzimba ngaphambi kokudlula kokuhlaziywa.
Kukhona uhla lwezincomo zokuhlaziywa kohlaka lwesikhathi:
Kubantu abaphilile, ukuhlolwa kufanele kwenziwe kanye njalo eminyakeni emithathu,
Igazi linikelwa ngonyaka ngemiphumela yangaphambilini engu-5.8 kuya ku-6.5,
Njalo ezinyangeni eziyisithupha - ngomphumela wamaphesenti ayi-7,
Uma i-hemoglobin ye-glycated ingalawulwa kahle, khona-ke izinkomba zokulethwa ziba njalo kuma-trimester.
Ngokunikela ngezinto ezibonakalayo ku-hemoglobin ye-glycated, amasampula egazi awenzeki hhayi kuphela ukusuka emunweni, kodwa futhi nasemthanjeni. Indawo lapho igazi liqoqwa khona izonqunywa ngokuya nge-analyzer esetshenzisiwe.
Ungayibuyisela kanjani imingcele ejwayelekile ye-glycogemoglobin?
Imingcele ephezulu ye-hemoglobin ephezulu ye-glycated iholela kwisifo sikashukela, ngakho-ke kufanele unamathele ekudleni okuthile, nendlela yokuphila efanele, nakulabo abanesifo sikashukela, kudingekile impela. Incomo yendlela yokuphila injengokulandelayo.
Ukudla okunempilo. Udinga ukudla izithelo nemifino emisha, ubisi nemikhiqizo yobisi olunoshukela, inhlanzi. Khipha ukudla okulula kanye nezinhlanzi ezinamafutha.
Buyisela Ukulala Okujwayelekile. Ukugcina uhlelo lwezinzwa nempilo yengqondo ejwayelekile, kuyadingeka ukunika umzimba isikhathi esanele sokululama, ngendlela yokulala okugcwele,
Ukwenza ezemidlalo. Kufika kumizuzu engamashumi amathathu ngosuku kunconyelwa ukuthi kunikezwe ukuqeqeshwa. Ikakhulu imidlalo efana nokubhukuda, i-aerobics, ukuhamba ngezinyawo. Lokhu kuyasebenza, ngoba umsebenzi wenhliziyo uyathuthuka, isisindo sincipha, okuholela ekuncipheni kwe-glycogemoglobin,
Ukumelana nokucindezela. Ukucindezelwa okungokomzwelo, ukuwohloka kwemizwa nokukhathazeka - konke lokhu kuthinta ukwanda. Bawuthinta kabi umsebenzi wenhliziyo, okuholela ekwandeni kokusebenza. Izici ezingezinhle kanye nokuvela okuqinile ngokomzwelo kufanele kugwenywe.
Izincomo ezingenhla zihlose ukuvikela ezinye izinkinga futhi zigcine i-hemoglobin ye-glycated ngaphakathi kwemikhawulo ejwayelekile kwiziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus.
Isimo sezulu esinguchwepheshe
Uma umzimba uthinteka yisifo sikashukela i-mellitus, khona-ke kuyadingeka ukuqapha ngokucophelela imikhawulo yesimo se-hemoglobin ye-glycated, usebenzisa i-glucometer nezeluleko zezokwelapha. Umthamo ofanele we-insulin uyadingeka ukuze kulondolozwe isimo esinempilo.
Ngokudla okufanelekile, ukudla njalo i-insulin nokuphila impilo esebenzayo, i-prognosis iyathandeka, ngesifo sikashukela baphila iminyaka eminingi.
Uma uqala lesi sifo ngezigaba ezinzima, futhi ungasebenzisi izincomo ezingenhla, khona-ke ukunganaki kungaholela ekuhlaselweni yisifo senhliziyo, isifo sohlangothi, isifo sezinzwa kanye nenhliziyo, ukwehluleka kwezinso, ukulahleka kokuzwela kwezingalo.
Ukupholisa amanxeba okuncane kuyabonakala futhi, lapho kufanele uqaphele ikakhulukazi, amanxeba amakhulu apholisa isikhathi eside kakhulu, futhi ukulahleka ngokweqile kwegazi okucasulwe yilokhu kungaholela ekufeni.
Inani le-hemoglobin ngesikhathi sokukhulelwa
Ngesikhathi sokukhulelwa, ukugcwala kwe-glucose egazini kungakhuphuka. Ngaphezu kwalokho, lokhu kuyenzeka kwabesifazane abangakaze babe nezinkinga zempilo phambilini. Umama okhulelwe akaboni noma yiziphi izimpawu ezethusayo. Okwamanje, ingane izuza isisindo esingama-4,5 kg, lapho ngokuzayo izoba nzima ukuzala kwengane. Omunye umehluko wokuthi ushukela ukhuphuka ngemuva kokudla futhi uhlale unjalo amahora angu-1 kuye kwayi-4. Ngalesi sikhathi, kunomthelela omubi embonweni, ezinso nasemithanjeni yegazi.
Isici esilandelayo - amazinga kashukela wegazi akhuphuka ngenyanga yesi-6 yokukhulelwa. Kodwa-ke i-hemoglobin ye-glycated iyatholakala ngokuhamba kwesikhathi. Inkomba ikhula kuphela emva kwezinyanga ezi-2 noma ezi-3, okungukuthi, ngenyanga ye-8-9 yethemu. Shintsha noma yini ngosuku olwandulela ukuzalwa kwengane ngeke iphumelele. Ngakho-ke, ezinye izindlela zokuqinisekisa ziyanconywa. Isibonelo, thatha isivivinyo sokukhuthazelela i-glucose esisebenza amahora angama-2 (izikhathi ezi-1-2 ngesonto). Ungathenga ne-glucometer futhi ulinganise ushukela ekhaya. Lokhu kufanele kwenziwe imizuzu engama-30, 60 no-120 ngemuva kokudla.
Uma inkomba iphansi, khona-ke akukho bungozi. Ngomaki omama ophakathi, kufanele ucabangele kabusha indlela yakho yokuphila. Uma ukuhlaziywa kwembula ukugxila okukhulu, kuyaphuthuma ukuthatha izinyathelo zokunciphisa amazinga kashukela. Shintsha indlela odla ngayo, yidla imifino nezithelo ezintsha.
Uma ingane inoshukela omningi we-glycated isikhathi eside, khona-ke ukwehla kwayo okubukhali kugcwele ukonakala kwamehlo. Njengoba kunenkomba ye-10%, kuyadingeka ukwehlisa kungabi ngaphezulu kwe-1% ngonyaka.
Ukulawulwa kwe-hemoglobin ye-glycated yisilinganiso esibalulekile sempilo ephelele yeziguli ezinesifo sikashukela. Ukutholwa kwesikhathi kwezinkomba kusuka ngesikhathi esivamile kusiza ukulungisa ukwelashwa futhi kuvikele nezinkinga ezinkulu.